Tablette ho an'ny sekoly: iza no hofidiana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Am-polony taona vitsivitsy lasa izay handinihana azy dia ampy ny nanondroana ny boky rehetra an-tsekoly tamin'ny mpampianatra; Ankehitriny, etsy ankilany, ny tanora sy ny tanora manatrika sekoly sy ny lisea dia tsy maintsy manana takelaka farafahakeliny farafaharatsiny, izay tsy ilaina amin'ny fandraisana naoty, hanaovana fikarohana amin'ny Internet ary hiarahan-dalalina kokoa amin'ny lafiny fianarana miaraka amin'ny mpampianatra fa koa handamina haingana lesona lavitra na hianarana miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny videoconferansa (izay mbola manan-danja kokoa raha misy fameperana sy fetra apetraky ny manampahefana ara-pahasalamana.
Satria Ilaina amin'ny takatry ny mpianatra maoderina ny takelaka, amin'ity torolàlana ity dia hasehonay anao ny takelaka tsara indrindra ho an'ny sekoly azonao atao ny mividy an-tserasera, noho izany dia afaka misafidy modely haingana, mailaka ary mifanentana amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny fanabeazana ianao. Raha irintsika mividy ilay takelaka vaovao ho an'ny sekoly Ao amin'ny magazay ara-batana na any amin'ny foibe fiantsenana dia soso-kevitra hatrany ny hijerena voalohany ireo toetra ara-teknika naroso, mba tsy hividianana takelaka tsy mitombina sy tsy azo esorina amin'ny fisalasalana mampiahiahy.
VAKIO IHANY: Tablet Android tsara indrindra: Samsung, Huawei sa Lenovo?
Ny takelaka an-tsekoly tsara indrindra
Betsaka ny takelaka mety amin'ny sekoly, saingy vitsivitsy ihany no tena tokony hodinihina amin'ny fampianarana. Ny mpampianatra sy ny profesora sasany dia hametraka maodely manokana ho an'ny kilasy iray manontolo, ka manontania foana alohan'ny hanaovana fividianana izay mety tsy marina.
Alohan'ny hividianana takelaka atokana ho an'ny sekoly, manoro hevitra anao izahay mba hijery ireto toetra ara-teknika manaraka ireto:
processeur: Raha te-hanomboka ny rindran-tsekoly rehetra dia tsy maintsy mifantoka amin'ireo maodely misy processeur quad-core 2 GHz na fanavaozana mahery vaika kokoa (kinova misy CPU an'ny Octa-core).
ram: ny fampandehanana ny rafi-piasa sy ny rindranasa fanabeazana dia ampy ny 2GB RAM, fa ny afaka manokatra na dia 2 na 3 aza mavesatra nefa tsy misy olana dia tsara ny mifantoka amin'ireo maodely misy RAM 4GB.
Fahatsiarovana anaty- Ny takelaka an-tsekoly dia hameno haingana ireo naoty, bokikely ary rakitra PDF alaina, noho izany dia tsara kokoa raha manana memoara 32GB farafahakeliny, tsara kokoa aza raha azo itarina (farafaharatsiny amin'ny maodely Android). Mba hisorohana ny olan'ny habakabaka dia mamporisika mafy izahay ampidiro serivisy rahona aiza no hitahiry ireo rakitra lehibe indrindra.
efijery: Ny efijery dia tsy maintsy farafahakeliny 8 santimetatra ary tsy maintsy manohana ny famahana ny HD (tsipika marindrano mihoatra ny 700). Ny ankamaroan'ny maodely dia hanome efijery miaraka amin'ny teknolojia IPS, fa afaka mahita koa Retina (amin'ny Apple).
Conectividad- Raha te-hifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi dia mila modely tsy misy tariby roa-tarika ianao, amin'izay afaka mandray soa ihany koa ianao fifandraisana 5 GHz haingana. Ilaina ihany koa ny fisian'ny Bluetooth LE, hahafahana mampifandray ireo maodely amin'ny headphone tsy misy tariby. Ny maodely misy SIM sy ny tambajotram-pifandraisana (LTE na taty aoriana) dia lafo kokoa sy ho an'ny fanabeazana dia asa tena tsy misy ilana azy tokoa.
fakan-tsary: Ho an'ny kaonferansa horonantsary dia ilaina ny fisian'ny fakantsary anoloana, mba hahafahanao mampiasa Skype na Zoom tsy misy olana. Ny fisian'ny fakantsary aoriana dia safidy mahaliana, satria ankoatry ny sary dia avelany scan antontan-taratasy hamadika azy ireo ho nomerika.
fizakantena- Ny takelaka dia manana bateria lehibe kokoa noho ny smartphone ary mamela, amin'ny fepetra fampiasana mahazatra, hahatratra 6-7 ora fampiasana.
Rafitra miasa: saika ny takelaka rehetra izay hasehonay anao Android ho toy ny rafitra miasa fa tsy tokony hamaivanintsika loatra iPads miaraka amin'ny iPadOS, rafitra haingana, haingana ary matetika ilaina (ny mpampianatra sasany dia hangataka manokana an'ny iPad ho fitaovana fampianarana).
Modely amidy azo isafidianana
Rehefa avy niaraha-nahita ny sasany amin'ireo fiasa tokony hananan'ny takelaka tsara ho an'ny sekoly dia andao hojerentsika avy hatrany izay modely azonao vidiana, manomboka amin'ny mora indrindra ka hatrany an-tampon'ny tandavan-tantara. Ny maodely voalohany izay anoroanay hevitra anao hoheverinao ho takelaka ho an'ny sekoly dia ilay iray vaovao Fire HD 8, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny € 150 (miaraka amin'ny tolotra manokana mavitrika).
Amin'ity takelaka mora vidy ity dia ahitantsika ny efijery IPS HD 8-inch, quad-core processeur, 2GB RAM, 64GB misy fahatsiarovan-tena azo havaozina, fidirana USB-C ho an'ny famandrihana, fakan-tsary eo aloha, fakan-tsary any aoriana, fahaleovan-tena hatramin'ny 12 ora ary rafitra fikirakirana an'ny tompony amin'ny Android (tsy misy Play Store fa misy Amazon App Store).
Raha mila ny Play Store amin'ny takelaka misy ny sekoly isika ary manamora ny fitadiavana rindranasa fandalinana dia afaka mifantoka amin'ilay takelaka isika Samsung Galaxy Tab A7, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 250 €.
Ao amin'ny takelaka Samsung dia ahitantsika ny efijery 10,4-inch miaraka amina vahaolana 2000 x 1200 Pixel, processeur octa-core, 3 GB RAM, 32 GB fitadidy anatiny azo hatsaraina, Wi-Fi misy tarika roa, fantsom-pifandraisana mandeha ho azy, fakan-tsary eo aloha, fakan-tsary aoriana, bateria 7040 mAh ary rafitra fiasa Android 10.
Takelaka iray hafa mety ampiasaina any an-tsekoly ny Lenovo Tab M10 HD, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 200 €.
Amin'ity takelaka ity isika dia afaka mahita efijery Full HD 10,3-inch, processeur MediaTek, RAM 4GB, fitadidiana anatiny 64GB, WiFi + Bluetooth 5.0, dock miaraka amina mpandahateny am-peo, mpanampy ny feo Alexa mifangaro ary batterie 10 ora faharetana.
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavintsika ny takelaka be mpividy indrindra eny an-tsena amin'ny vidiny rehetra (na ny mpampianatra mametraka enta-vokatra Apple amintsika), azontsika atao ny mandinika nyApple iPad, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 400 €.
Toy ny vokatra Apple rehetra, dia karakaraina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra izy ary manana fisehoana Retina 10,2-inch, processeur A12 miaraka amin'ny Neural Engine, fanohanana ny Apple Pencil sy Smart Keyboard, fakan-tsary 8 MP any aoriana, Wi-Fi an'ny tarika roa, fakan-tsarimihetsika Bluetooth 5.0 LE, 1.2MP Front FaceTime HD fakan-tsary, mpandahateny stereo ary rafitra fikirakirana iPadOS.
Raha tsy afa-po amin'ny iPad tsotra isika ary mila PC mini azo entina manao ny zavatra rehetra, ny maodely tokana hifantohana dia nyApple iPad Pro, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 900 €.
Ity takelaka ity dia mampiseho fisehoana Liquid Retina 11 "an-tsisiny miaraka amin'ny haitao ProMotion, processeur A12Z Bionic miaraka amin'ny Neural Engine, fakan-tsary 12-zoro aoriana, 10MP zoro malalaka, scanner LiDAR, fakan-tsary eo anoloana 7MP TrueDepth, Face ID , feo misy mpandahateny efatra, rafitra fiasa Wi-Fi 802.11 vaovao 6ax ary iPadOS.
Ireo takelaka natolotray etsy ambony dia mety indrindra amin'ny fampianarana rehetra, manomboka amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka hatramin'ny oniversite. Na ireo maodely mora indrindra aza dia manao ny anjarany tsara, na dia ampirisihina foana hifantoka amin'ny iPad (rehefa avelan'ny toe-karena izany) noho ny hazavany, ny hafainganan'ny fampiharana sy ny fifanarahana amin'ireo fitaovana fanabeazana.
Raha mitady takelaka misy kitendry namboarina ianao, dia manoro anao izahay hamaky ireo mpitari-dalana anay Tablet-PC 2-in-1 tsara indrindra misy klavier azo esorina mi Solosaina finday Windows 10 tsara indrindra azo ovaina amin'ny takelaka. Raha, etsy ankilany, tsy miala amin'ny hery sy fiononana amin'ny fanoratana atolotray kahie nentim-paharazana isika dia afaka manohy mamaky ao amin'ilay torolalana Ny kahie tsara indrindra ho an'ny mpianatra.
Ahoana ny fomba filalaovana lalao PS5 tsy misy console
Fitaovana ilaina 7 ho an'ny asa hendry
Fomba maro be hampiasana Mac Mini toy ny PC, TV Box ary NAS
Manao ahoana ny PS5? famakafakana sy fitarihana ny Playstation vaovao
Huawei vs Xiaomi: iza no manao finday avo lenta tsara indrindra?
PC tsara indrindra amin'ny rehetra izay mandany habaka kely
Ahoana ny fisafidianana ny solosainao ho an'ny sekoly na ny oniversite
Solomaso misy audio Bluetooth, ho an'ny solomaso mainty fa tsy
Ny solosaina PC tsara indrindra azo vidiana ao anaty boaty
Tsy mandeha ny charger laptop: ahoana no fanamboarana azy?
Ireo mpandahateny sy mpandahateny tsara kokoa miaraka amin'ny Google Assistant